ကျော်ဟုန်း – ဖား သုတေသန | MoeMaKa Burmese News & Media
ကျော်ဟုန်း – ဖား သုတေသန
(မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၅
ထ အော်တဲ့ ဖား။
စည်လို့ ဝေလို့ 
စူလို့ ဖြိုးလို့ ။
၁၀ ၊ ဇန်နဝါရီ၊ ၂၁၀၅။
One Response to ကျော်ဟုန်း – ဖား သုတေသန
painghtwe on January 13, 2015 at 6:45 am
Thank you ! They know themselves.
ပ န်းနဲ့ လူ
ယောဟန်အောင် ● ပြည်တော်ပြန်
ကျော်ဟုန်း - သရဏမဉ္ဖူကျောင်း ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ပွဲ အင်ဒီယာနာဖိုလစ်မြို့ တွင် ကျင်းပ
ရှင်ကွဲ သေကွဲအရပ်မှာ ... ပိတောက်တွေ ပွင့်တဲ့အခါ
မောင်စွမ်းရည် “ ရှစ်လေးလုံးကား မဆုံးသေး ”
မောင်စွမ်းရည် - ကျနော်ရရှိတဲ့ အမွေ
မောင်နောင်မွန် – လောင်ကျွမ်းပြာကျပြီးနောက် -၃ https://t.co/VIOtEWLoCV https://t.co/esoVNo6IXl about 13 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်လူရေး – ကိုကိုရဲ့ ညီမလေးအချစ် (၁) https://t.co/Fh9b5PfYw5 https://t.co/3sig8nKTA0 about 19 hours ago ReplyRetweetFavorite